Sidee wax loo cusbooneysiiyaa iyada oo aan loo baahnayn | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo cusbooneysiiyo iyada oo aan loo baahnayn in la sameeyo
Anti | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Naqshad
Dhowr maalmood ka hor Apple waxay soo bandhigtay dib-u-habeyn muuqaal ah oo muddo dheer la sugayay oo ku saabsan nidaamka mobilada ay ku shaqeyso, mana heli karo ereyo ka badan "foolxumo" oo aan si kooban ugu sharraxo. Hadda, bannaanka aagga falcelinta ugu horreysa, kama haysanno wax ka badan niyad-jabka samatabbixinta: macruufka 7 asal ahaan waa nidaam isku mid ah had iyo jeer, laakiin leh midab midabkeedu aad u badan yahay, daahfurnaan xadka u ah qosolka oo aan aad u dhiirrigelin war.
In kasta oo Apple aysan mawduuc u ahayn meeshan, dhacdadani waxay tusaale u noqon kartaa go'aammada naqshadeynta liidata ee mawduuca guud ahaan ka yara duwan: isdhexgalka isticmaaleyaasha iyo sida ugu habboon ee loo cusbooneysiiyo. Aynu iska dayno arrinta Apple daqiiqad, laakiin ka hor intaanan u mahadcelinin shirkadan inay baabi'isay dhammaan hadhaagii rabitaanka mid ka mid ah aaladooda maskaxdeena.
1 Naqshadeynta bannaanka
2 Naqshad fudud
3 Cusbooneysii adigoon wax cusub soo bandhigin
"In yar ayaa ka badan". Weedhan, oo laga yaabo inay ku soo celceliso mantra oo ay u soo diraan qaar naqshadeeye keli ahi meel kale oo adduunka ah; waa mabaadi'da aasaasiga ah ee adkeynaysa isbeddelka hadda jira ee naqshadeynta fudud oo si fiican ugu habboon isticmaalka dhabta ah ee la siiyo codsiyada. Si kastaba ha noqotee, fikraddan umuuqata mid fudud ayaa u rogmatay dadaal lagu doonayo in wax walba loogu rogo muuqaal toosan oo sahlan oo ah fikrado hore u duugoobay.
Waan sharaxayaa. In kasta oo naqshadeynta walxaha jirka ay tahay gebi ahaanba gebi ahaanba ku xiran xaqiiqda iyo xaddidaadkeeda, sameynta arjiga kombiyuutarka ayaa si toos ah ugu xaddidan fikradda laga soo maleegay. Had iyo jeerna waxaa jira meel lagu hagaajiyo, si kasta oo ay u fiicnaan karto.
Aynu ka fikirno tusaale deg deg ah: Google. Jaangoynta muuqaalka adeegyadaada waa tallaabo weyn oo loo qaaday dhanka iswaafajinta oo si toos ah uga faa'iideysata adeegsadaha iyadoo laga fogaanaayo baahida loo qabo in dib loo barto fikradaha lagu celceliyo boggaaga oo dhan. Taasi waa sababta khibrada cusub ee Google+ ay u tahay mid jahawareer leh: dib u soo nooleynta giraangiraha ayaa ah mid aan waxtar lahayn.
Ma jiraan wax joogto ah. Ma jiraan feejignaan. Xeerarkii ciyaarta ayaa si dhakhso leh isu beddelay. Iyo waxaas oo dhan oo ay la socdaan faahfaahin qosol leh sida "dawan farxad leh" ee ogeysiisyada ama wareejinta aan loo baahnayn ee baarka sare.
La Linus Torvalds xanaaq Waa qiil, laakiin waxay leedahay sababo qaldan. Dhibaatadu maahan qaab qorista, waa fikradda ay soo jeedinayso Google. Naxdin.
Ku haynta fikradaha hordhaca ah ma fiicna nasiib darose, waxay noqon doontaa wax aan arki doonno si isdaba joog ah inta lagu gudajiro dhismahan fidsan iyo mid fudud oo sii wadaya inaanu waxba iska badalin habka aan u adeegsano codsiyadayada
Imisa guji ayaad email ku qori kartaa? Waddo ku habboon ayaa naga qaadi karta furitaanka barnaamijka, adigoo riixaya badhanka "Cusub" iyo ka dib qorista iyo hubinta faahfaahinta kuwa helaya iyo faylasha ku lifaaqan; ilaa aad bixinaysid gujiska ugu dambeeya ee «dir». Saddex guji oo teori ah oo u eg wax macquul ah xitaa haddii ficil ahaan aysan ahayn.
Aynu ka fikirno inta hawlood ee loo keeni karo xitaa waxtarka la midka ah iyo sida barnaamijyada loo xilsaaray fulinta shaqooyinkani ay u ekaan doonaan; iyagoon xitaa ka fikirin qaab "flat" ah ayaga. Had iyo jeer waxaa jira dariiq ka wanaagsan oo wax lagu qabto, xitaa haddii ay aad u adag tahay in la helo. Tusaalaha cajiibka ahi waa farsamada 10 × 10, oo lagu soo koobi karo sida loo sawirayo fikrada su'aasha toban jeer, marwalba ka geddisan, ka dibna toban jeer ka badan fikradda guuleysiga. Nidaam daal, laakiin goosasho aan qiimo lahayn.
Hal tusaale oo dheeri ah: sideen u horumarin karnaa ficil yar oo dadban, sida dhageysiga muusikada? KDE waxay ila tahay feker ahaanteyda mid ka mid ah ciyaartoyda maqalka ugu fiican halkaas, laakiin waxay leedahay boos lagu hagaajiyo, maadaama aan aragnay inay leedahay wax walba. Dhibaato gaar ahaan baahsan ayaa ah macluumaad soo noqnoqda. Aynu eegno shaashadda soo socota:
Magaca raadraaca waxaa lagu celceliyey shan jeer qaabka caadiga ah. Cinwaanka daaqadda, korka barta horumarka, liiska-ku-qoran iyo tufaaxa '' Context '' iyo 'Lyrics' (kan dambe lama muujiyo maxaa yeelay Amarok ma uusan helin ereyada heesta), iyadoo aan la tirin ogeysiiska soo baxa marka track bilaabmaa. Waxaan rabaa inaan ka fikiro in hal mar oo kaliya ay igu filan tahay, laakiin tani waa wax aan macquul ahayn.
Ka dib isbeddelka cusub ee cinwaanka laga saarayo daaqadda - taas oo u sii dheereysa kombuyuutarrada bilaashka ah, sida Pantheon oo ka socda dugsiga hoose ee OS ama GNOME, iyo sidoo kale kuwa leh, sida Mac OS X - ugu yaraan hal ku celcelin magaca wadada ayaa noqon kara laga saaray
Qalabka khafiifka ah - ee aan isticmaalo - mid kale ayuu naga qaadanayaa, ugu dambeyntiina, isbeddelka tufaaxa ayaa xitaa ka saari kara mid kale.
Faahfaahinta noocyadan ah way fududahay in la saxo mana soo bandhigaan khilaafyo culus oo loo adeegsado barnaamij. Laakiin waxaa jira tusaalooyin muujinaya dhibaatooyin aad u daran, gaar ahaan dhanka barnaamijyada moobiilka.
Cusbooneysii adigoon wax cusub soo bandhigin
KDE waxay leedahay fursad weyn oo lagu horumariyo si ballaadhan casriyeynta garaafka mala awaalka ah. Cusboonaysiinta ugu weyn ee garaafka ah ayaa wajihi doonta caqabadda ah in lagu habeeyo qaabeynta KDE ee caadiga ah qaab cusub; laakiin runtii kalsooni ayaan ku qabaa dadka ka dambeeya mashruucan.
Ogsijiintu waxay ubaahantahay waji qurxin, laakiin runti maahan mid culus oo si fudud looqaato waxay lumineysaa fursado sida Apple ay sameysay. Fikraddu maahan in KDE loo rogo shiraac cad oo leh astaamo midabyo badan leh, laakiin waa in loo abuuro waayo-aragnimo cusub oo muuqaal ahaan raalli noo ah annaga, adeegsadeyaasheeda.
Waxaan weydiisan karnaa waxyaabo fudud. Midab midab badan oo miyir leh oo ku yaal astaamaha si looga saaro ceebaynta muraayadda ay wateen muddo dheer. Fududee widgets Oxygen-ka iyada oo aan run ahaantii ka dhigayn mid caag ah sida GNOME.
Waxaas oo dhami waxay ku lug leeyihiin shaqo aad u weyn. Laakiin waa inaan ku adkaysto in dhammaan isbeddeladaas oo aad noo farxad gelin lahaa ayan run ahaantii waxba xallin. Waa inaan dib uga fikirnaa sida aan u isticmaalno codsiyadayada maanta oo aan wax cusub oo la yaab leh uga dhisno wixii aan ka helnay.
Waxaan u leeyahay KDE maxaa yeelay waxaan ku helay kalsooni weyn mashruuca. Waan la qabsaday KDE mana arko deegaanno kale oo isla indhahayga mar dambe sii wata. Waxaan jeclaan lahaa inaan wax ku darsado wax ka badan oo kaliya ereyadan dhiiri gelinta naqshadeeyayaasha, farshaxanleyda, iyo barnaamijyada sameeya tan maalin kasta, tanna waxaan u leeyahay maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inay yaqaanaan waxa ay sameynayaan iyo halka ay u socdaan.
Looma baahna in dib loo cusbooneysiiyo giraangirta. Uma baahnid inaad ku rinjiyeysid caddaan iyo buluug oo aad tidhaahdo waa cusub tahay. Waa inaad qaadataa gaariga KDE-ga oo sifiican loo sameeyay oo u rog mashiin diyaaradeed. Waana ku kalsoonahay in tani goor dhow ama ka dib ay ku hirgeli doonto shaashadda hortayda.
Muusigga lagu soo bandhigay shaashadda shaashadda waxaa laga heli karaa si sharci ah oo bilaash ah xiriiriyeyaasha soo socda:
Ka Codso Gudaha by Caweyska Dalmar
Wax -qabad la'aan by Bayard Russell.
Siyaasada Rabitaanka by Aflaanta Studio
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Sida loo cusbooneysiiyo iyada oo aan loo baahnayn in la sameeyo
Sida iska cad tani waa aragti shaqsi ahaaneed iyo mid shaqsiyadeed oo ay ka buuxaan fikrado khaldan iyo gabagabo khaldan - oo gebi ahaanba laga tuuray aadanaha intiisa kale.
Ama ugu yaraan aniga ahaan.
Maqaalka mise iOS 7? Ma helayo
Haa, arrimaha la xiriira qaabeynta qaabeynta waxaa lagu qasaaya softiweer.
Taasi waxay ahayd fikradda. Waxaan ula jeedaa, waxaan ula jeeday in naqshadeynta ay muhiim u tahay codsiyada iyo qaabka loo adeegsado, si loo helo xalal wanaagsan. Taasi waxay ahayd kaftanka.
Sidee xun aad wax u dhigto ahahaha
Cabashada kaliya ee aan ka qabo macruufka ayaa ah in hada ay umuuqato taleefan android / windows badan ..., aad ayey ugafiicneyd kahor, laakiin haye, waxaan filayaa inay dadku laqabsanayaan ...
Marka laga hadlayo kala-goynta, waxaan jeclahay naqshada cusub ee google +, qaabka font, maxaa yeelay ma aqaano, maxaa yeelay waxaan ku qasbaa isku nooc oo dhammaan boggaga internetka ..., kuwa waaweyn.
Ku saabsan kde, waxaan raadin lahaa inaan abuuro fikrad cusub 🙂
sida aan ku aqriyay bog kale: Android + WP8 = iOS7 xD
Waxaan arkay fiidiyowga iOS-ka iyo waxa kaliya ee dib loo iibsan karo ee uu haysto ay tahay inay ugu dambeyntii awood u siisay bluetooth inuu ku wareejiyo faylasha. Inta soo hartay, halkii ay i xasuusisay Android 4 (waa ficil ahaan iDroid).
Apple waa ficil ahaan tababarka Microsoft. Waxa kaliya ee uu runtii isagu sameeyay wuxuu ahaa Apple II, waxay ahayd wadarta qoraagii Steve Wozniak.
Camilo Tellez dijo
Tan waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in software-ka bilaashka ah ay waddo dheer u socoto si loo hagaajiyo isdhaafsadooda, adeegsiga iyo saaxiibtinimada.
Taasi waa waxa ka dhigaya software-ka ganacsiga mid soo jiidasho leh, maxaa yeelay ujeeddada koowaad waa waayo-aragnimada isticmaalaha.
In kasta oo softiweer bilaash ah loo abuuray qaab aan rasmi ahayn oo qas ah, barnaamijyada iskaa wax u qabso ku shaqeeya waqtigooda firaaqada ah, softiweerka lahaanshuhu waa mid aad u badan oo rasmi ah, oo la qorsheeyay, waxay kireystaan ​​khabiiro ku takhasusay aag kasta (barnaamijyada, qaabeynta, hubinta tayada, imtixaanka, iwm.)
Ku jawaab camilo tellez
Miyaa KDE iyo Blender (in yar oo magacyadooda ah) lagu sameeyaa qaab qasan oo aan rasmi ahayn?
Taasi miyay taasi tahay markay sameyaan isdhexgal fudud, waxay ku tuuraan shit it. Tusaalaha Gnome Shell
Ku jawaab Andrelo
Shell malahan interface fudud, waxay leedahay interface lakab ka duwan. Dhibaatadu maahan inay yareeyaan oo nadiifiyaan, dhibaatadu waxay tahay inay jaraan shaqooyinka aan u muuqan kuwa quruxsan maxaa yeelay fikraddooda "looma baahna" ... tusaale deg deg ah: Nautilus way kala qaybsameen. Taasi, iyo kuwo kale oo badan.
Waxaa kugula qarxay faallooyin nacayb noocaas ah. I saamax, laakiin waxaad kuhadashay waxaad sheegtay.
Bal eeg, horta waxaad leedahay horumarka SL waa hiwaayad halkii ay ka ahayd hawl culus oo fadlan, iska ilaali.
Tusaalooyinka waxa noqon kara isdhexgalka wanaagsan ayaa lagu kala firdhiyey meel kasta inkasta oo KDE ay u baahan tahay in lagu sii wanaajiyo arrintaas (waxay ka shaqeynayaan iyada oo loo marayo goobaha shaqada ee plasma 5) xitaa ma aha meel fog oo aan ahayn mashruuc aan rasmi ahayn oo yar oo qorshaysan, waxay leedahay lacag xitaa hay'adaha dawladda Yurub.
Inbadan ma dhihi doono, uma qalanto.
Sidee ufiican yahay softiweerka ganacsiga, mid soo jiidasho leh oo si hufan loo qorsheeyay ... http://www.kuro5hin.org/story/2004/2/15/71552/7795
Waxaan u maleynayay inuu ka hadlayo IOS7 laakiin aakhirkii wuxuu ka careysnaa gnome iyo KDE
Maxay tahay sababta dhabta ah ee aan ugala hadlayo IOS7 sida oo kale barta blog-ka ee Linux (?) Waxaan leeyahay ...
Waan ku raacsanahay gorfayntaada waana layaab sida ay dhowr qof ugu fashilmeen qabashadooda.
Maalmahan interface-ka isticmaalaha, qeybta garaafka iyo khibrada isticmaale ee arjiga ayaa ka muhimsan ama ka muhimsan howlaha barnaamijka laftiisa. Iyo haa, tani waa wax ay horumariyayaashu ku adag tahay inay arkaan ... qodobkan ayaa laga yaabaa inuu ku xiiseeyo:
Iyo KDE waxay leedahay laba tartan. Kombuyuutarrada intiisa kale waxay si xoog leh u beddeleen sharadka qaab-dhismeedka qaab 'ka wanaagsan' ee loo adeegsado desktop-ka, laga yaabee inuu ka fudud yahay waxna soo saar badan yahay. Ma hubo in KDE ay ka soo jeesaneyso waqooyiga ay hadda ku sugan tahay, waxaan leenahay desktop xarrago leh, awood badan, shaqeynaya oo si buuxda loo qaabeyn karo. Sidee loo hagaajiyaa? Way dhib badan tahay, laakiin sidoo kale waxaan u maleynayaa in dadka KDE ay ogyihiin waxa ay sameynayaan.
Salaan, gelitaan aad u wanaagsan!
Dhowr maalmood ka hor waxaan aqriyay in KDE ay dib ugu qoridoonto HIGs liisaska dirista isticmaalka.
Sidoo kale waa ..
Waan taageersanahay aragtida Gerardo iyo, in kasta oo aan kugu qanco Msx, waxaan u maleynayaa inaad wax yar ka dhiman tahay aragtidaada.
Fikradda halkan ku taal, in kasta oo ay ku dheehan tahay codad shaqsiyeed, waa la fahmi karaa.
Marwalba waan la dagaallami jiray dadka waxyaabo sida Dugsiga Hoose, in kastoo si kasta oo ay u weyn tahay fikraddooda iyo iyadoo aan loo eegin sida quruxda badan ee ay nashqad u leedahay, ay mararka qaarkood uga gudbaan khadka u dhexeeya fudeydka iyo shaqeynta. Ma dhahayo inay khalad tahay in laga saaro ikhtiyaariyada, laakiin inaan laga saarin, oo aan la rujin iyaga tusaale ahaan Gnome wuxuu la sameynayay Nautilus, haye, nadiifi interface-ka sida ay fursadahaasi wali ugu jiraan kuwa yaase isticmaalay, laakiin in aysan ka hor istaagin fikradda isdhexgal dheeraad ah.Haddii aan sharaxo naftayda? barnaamijku WAA IN uu ahaado mid shaqeynaya, maahan kaliya qurux, maxaa yeelay waxa quruxsan kaliya had iyo jeer ma shaqeeyaan, waxaad u baahan tahay isku dheelitirnaan.
Hagaag, aasaasiga waa kaftan, okay, waxay isku dayayaan inay nuqul ka sameeyaan osx ..., laakiin malaha kala bar shaqooyinka codsiyada iyo deegaanka mac ... iyo Waxay kaliya ku sharraxeen sharraxaadda ...
Sax, dhibaatadu waxay tahay markay ka gudbaan xariiqda wanaagsan ee udhaxeysa nadaafada iyo shaqeynta… cadaabta, maahan inay sidaas sameeyaan.
Qor si toos ah u tirtiro reggeaton ee qalabka USB ee ku xiran
KDE 4.11 Beta1 waa la heli karaa